Ukubhekana umbuso zamaKhomanisi namabutho undlovukayiphikiswa, futhi kamuva izwe ovulekile bekulokhu futhi namanje inkulumo mpikiswano hot namuhla. Phakathi nokubusa amandla Soviet kwakuminyene edidayo, ikakhulukazi owokuqala, inkathi yangaphambi impi. Amaqiniso uyaca nokudubula, izixhumanisi, indlala kanye nomkhathi ingqikithi besabe phambi amandla amabutho emphakathini wanamuhla sebekubeke ukugxeka lokhu umbuso esifanayo, ukukhohlwa zikhathi ezinhle, alingcunule kuya upende uSathane ufaneleke ubani oye ngandlela-thile zigcinwe ukuphikisa kwakhe. Ngisho noma kwaba yiqembu eliphikisayo ukhululekile ezivela kwamanye amazwe, noma okubi nakakhulu, ngokubambisana neNhlangano wamaNazi. Isibonelo esiyinhloko salokhu kwamuva futhi omunye Amakhasi impikiswano kakhulu ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe kuyinto Lokotskaya republic likhona isikhathi esithile ezifundeni ezinabantu.
abahleli Sanctuary noma zone khulula?
Lokotskaya Republic esaphakama ekwindla 1941 orel (manje Bryansk) esifundeni, ngesikhathi lapho amabutho iRed Army baphoqeleka ukuba siyeke la mazwe ngaphansi ukuhlaselwa we Blitzkrieg. Ngokwezwi nezwi igama elithi ku bangaphambi Elbow yokubeka (inhlokodolobha neoplasms) wajoyina impi Wehrmacht. lezi indawo ngaphambi kwempi zazibhekwa athembeke kakhulu emandleni Soviet: bendawo kwakukhona nabaningi kulaks wangaphambili nezinye izakhamuzi, njengoba ayephethe uhulumeni isikhalo.
Ngokuvamile, ezindaweni eziningi matasa wabahlaseli bazithola kulokho okuyinto akhiwa amaphoyisa aqabulayo. Nokho endaweni Lokotskaya babe isinyathelo. Njengoba kwadingeka khona ukwakha iziphathimandla zendawo ngaphambi kokufika amaNazi, ngisho ukufakaza zinyanga ukuzinikela kwayo okugcwele abahlaseli wakhetha ukushiya kumiswa ezifana isimo encane unodoli.
Kufanele kuqashelwe ukuthi Lokotskaya eRiphabhuliki -Third Reich esadlala indima ebalulekile kulokhu, ukuthi eqinisweni kwaba uphawu lokukhangisa izizwe yanqotshwa. It wenza indima efanayo amaphosta ukushaya ukuya emsebenzini eJalimane futhi sulivshie zonke kungenzeka ukuphila amnandi ngokuba Ukuyekwa kwezindlela ukumelana nokubambisana kobuholi kwamaNazi.
Lokotsky District ezinyangeni ka lalichumile - ekwindla ka 1941 ukuze Ehlobo lika-1943 - kwadingeka abantu abangaphezu kwengxenye yesigidi. Imeya wakhethwa ilungu wangaphambili asebenzayo we CPSU (b) Konstantin Voskobojnik wavele washintsha zabo ukubukwa ngemibono. nephini lakhe kwaba elinye ilungu pre-impi LamaKhomanisi, Bronislav Kaminski. Kugcine ezinyangeni zokuqala ezimbalwa republic upopayi wahlanganyela ukudalwa edumile Rona - Russian National Liberation Army. Yena kamuva abathintekayo ekulweni zishoshovu, wahlala eqotho ezweni labo, kanye kuphangwa ingajezisa ngokumelene bendawo, esolwa ubambisene abashokobezi futhi amasheya uhlobo Ukukhetha ophoqelelwe ukudla, imfuyo, kanye nezinye izidingo we Wehrmacht.
Phakathi nokuBusa kwakhe cishe iminyaka emibili khona weRiphabhulikhi waphawula Lokotskaya nokubulawa nsuku amaJuda zishoshovu, kanye nemizamo Clumsy sobuholi bakhe ukwethula ngokwabo njengoba Bakhululi futhi abaprofethi bakaJehova eRussia entsha, mahhala kusukela 'nenhlupho elibomvu ". Lokhu kumiswa indawo wawa kanye labaninizo lapho ngo-August 1943, ngemva kwaseStalingrad futhi eKursk Bulge, amaJalimane zinhlanga ngasentshonalanga.
New Year ukwakheka. Amathiphu amantombazane elikhanyayo